Maitiro ekuseta alarm paMac
Kana iwe uchipedza yakawanda yezuva rako pamberi peMac yako, dzimwe nguva ungangoda kuseta iyo Alarm pairi kuti ikubatsire kumuka kubva pakukurumidza dhesiki nap kana kurangarira chimwe chinhu.
Nehurombo, macOS haina yakavakirwa-mukati Clock app, uye nekudaro hapana chaiyo alarm sarudzo paMac. Asi uchishandisa nzira idzi, Mac yako inogona kukuyeuchidza zvinhu zviri nyore uye kupotsa kuita izvo alarm inowanzoita.
1. Seta alarm paMac uchishandisa Wake Up Nguva
Nguva yekumuka iapp yemahara iyo inokutendera kuti uise alarm paMac. Iyo app haina kuvandudzwa mumakore matanhatu apfuura, asi inoita basa uye inoshanda kunyangwe neyazvino vhezheni yeMacOS Monterey.
Heano maitiro ekuseta alarm paMac yako:
1) Vhura Nguva Yekumuka paMac yako, uye pasi Alarm Nguva, isa nguva yaunoda. Unogona kudzvanya tumiseve diki kana kusarudza nguva uye kushandisa kiibhodhi yako.
2) pasi rira, sarudza chero toni yearamu. Shandisa bhatani rekutamba kuti utarise. Ndinoda Cosmic.
3) Baya aramu yakatenderedza pa/kudzima bhatani kubva pasi kuruboshwe kugonesa alarm. Kana yangobatidzwa, uchaona iyo “Alarm yakaiswa” mavara mubhokisi rechiratidzo cheorenji. Alarm icharira yoridza ruzha kuti umutse panguva yakatarwa.
Wake Up Nguva alarm app (uye dzimwe nzira dziri muchidzidzo ichi) dzinoshanda kana Mac yako yakamuka. Kuti ugadzirise izvi, iwe unotevera izvi nzira dzekudzivirira Mac yako kubva pakurara. Kana, Kumuka Nguva ine sarudzo yekubatsira application iyo inoisa Mac yako kurara uye kuimutsa kana yasvika nguva yealarm. Kuti uwane mubatsiri, tinya (I) > Download mukati me app. Enda kuburikidza neiyo FAQs pawebhu peji reapp usati waisa mubatsiri app.
chitsamba: Paunosunungura faira uye wodzvanya kaviri kuti uvhure, Mac yako inogona kukutadzisa kuisa mubatsiri application sezvo isati yavandudzwa kubva 2013, uye Apple haigone kuona mugadziri. Kana uchida kuenderera mberi, unogona vhura mapurogiramu kubva kune vasingazivikanwe vagadziri pane imwe nyaya nokuenda System Preferences > Kuchengetedza & Kuchengetedzeka > Vhura Zvisinei.
Mamwe maalarm apps eMac
Heano mamwe emahara alarm / timer maapplication eMac yako kubva kuMacOS App Store:
1) Dhijitari Clock: Neichi chishandiso, unogona kugadzira akawanda maaramu emahara paMac yako. Iyo zvakare inoita kuti iwe utumidze maalarm ako, sarudza kubva akawanda manzwi, uye nezvimwe. Iyo interface inogona kuita seyakajairwa kualarm pane yako iPhone uye iPad. Nekudaro, mukuyedza kwangu, ndakaona kuti kana iyo app isiri paMac's desktop (ti iri pane imwe nzvimbo kana kuderedzwa), haizoridza ruzha uye kungoratidza chiziviso.
2) Kurara Alarm Clock: Iyo app inokutendera iwe kuseta alarm paMac. Nekudaro, inogona kuita buggy paunenge uchipinda iyo chaiyo alarm nguva. Kunze kweizvozvo, iyo app inoshanda nemazvo. (Mufananidzo wekutanga wedzidziso iyi unobva kuapp iyi.)
3) Howler Timer: Ichi chishandiso chiri nyore chinokutendera kuti uise timer, uye kana zvangodaro, Mac yako ichaita chema semhumhi. Kutaura chokwadi, ruzha rwekunzwika rwakanaka kwazvo.
4) Horo: Horo inguva yekutarisira app iyo inokutendera iwe kuseta timer. Iyo app inogara mune yako Mac menyu bar, uye kana nguva yakwana, inoridza ruzha kukuzivisa iwe.
Ndokumbira utarise kuti ese ari pamusoro apa mapurogiramu anongoshanda kana Mac yako isiri mukurara mode. Chivharo hachifanirwe kuvharwa paMac notebook (MacBook Air, MacBook Pro).
Related: Maitiro ekuchengeta MacBook yako yakasvinura chivharo chayo chakavharwa
2. Shandisa iOS Apps pamusoro Mac kuseta aramu
Kana iwe uchida yechitatu-bato alarm app pa iPhone yako kana iPad, unogona zvakanyanya kuiwana paMac yako neApple silicon (M1, M1 Pro, M1 Max, uye nyowani chip). Kune izvi, tsvaga iyo alarm app muMac App Store uye tinya "iPhone & iPad apps” kubva pamusoro pepeji yekutsvaga. Mushure meizvozvo, dhawunirodha iOS alarm app paMac yako kuti uishandise.
Mumuenzaniso uri pasi apa, ndakaisa Alarm Clock – Muka paMac yangu, uye inoshanda zvikuru. Ingo usangosiya app kana kuisa Mac yako kurara.
3. Shandisa Siri kuseta chiyeuchidzo paMac
Sezvambotaurwa, iyi haisi alarm asi inogona kubudirira kuita zvinoitwa nealarm - ndiko kuti, kukuzivisa chimwe chinhu.
Kutanga, daidza Siri pane Mac yako uye kumbira kuti ikuyeuchidze chimwe chinhu panguva yaunoda. Semuyenzaniso, ndiyeuchidze kuti ndirare na11:30 PM. Kana iwe ukakumbira Siri paMac kuseta alarm, inokuzivisa iwe nezvekusakwanisa kwayo kuzviita. Nekudaro, zvinokupa iwe kuti uise chiyeuchidzo panzvimbo.
4. Shandisa zviyeuchidzo app paMac
Kana iwe usingade kushandisa izwi rako kuseta "alarm" paMac yako, unogona kunyora kuna Siri. Iwe unogona zvakare kuvhura iyo macOS Zviyeuchidzo app, tinya iyo plus icon uye nemaoko gadzira chiyeuchidzo. Usakanganwa kuseta zuva chairo uyezve nguva yaunoda. Kuti ushandise nguva yetsika, tinya (I), sarudza nguva, uye shandisa kiibhodhi kuisa chero nguva yaunoda.
5. Shandisa Mac's Calendar app kuti uwane yambiro
Iwe unogona kugadzira chiitiko mune yako Mac's Calendar app uye uwane chiziviso. Nehunyanzvi hunoshanda, asi ruzha rweyambiro haruna simba, uye saka nzira iyi inogona kunge isiri iyo yakanakisa imwe nzira kune alarm. Zvakadaro, kana iwe uchida kuziva, aya madhairekitori anofanira kubatsira:
Maitiro ekushanda nemazuva ese uye akawanda-mazuva zviitiko muKarenda
Maitiro ekugadzira, kugadzirisa uye kudzima zvinodzokorora zviitiko muKarenda
6. Seta online alarm paMac
Chekupedzisira, unogona kushandisa imwe yemawebhusaiti akasiyana kuseta alarm paMac kana PC yako. Shanyira chero yeanotevera saiti, isa yako alarm nguva, uye itanga. Paunenge wakamirira alarm, ita shuwa kuti hauvhare iyo browser tab kana kuisa Mac yako kurara.
Heano mamwe eakanakisa mawebhusaiti ekuseta online alarm:
Mazhinji emasaiti aya anofanira kushanda kunyangwe Mac yako ikabviswa painternet mushure mekuseta alarm.
Alarm yakaiswa zvinobudirira paMac
Aya ndiwo maitiro aungaita maaramu paMac yako. Ndinovimba iyi tutori yakakupa akati wandei sarudzo dzekusarudza kubva. Sezviri pachena, iwo maworkaround haana kuita senge maalarm pa iPhone kana iPad, asi anofanira kubatsira zvakadaro.
Maitiro ekuchimbidza Mac